Jiro UV inona no tsara indrindra ho an'ny fanodinana?
Fotoana: 2020-04-08 Hits: 486
Ny taratra UV dia karazana onja taratra elektromagnetika avy mivantana avy amin'ny Masoandro ary tompon'andraikitra amin'ny risika maromaro, ohatra, ny volon'ny fahavaratra, sunburn, olana amin'ny maso, homamiadan'ny hoditra, sns.
Ary koa, ny hazavan'ny UV dia misy fiatraikany tsara amin'ny vatan'olombelona satria fantatsika rehetra fa mamporisika ny famokarana Vitamina D izy io ary manampy ny hery fiarovan'ny vatana mikaroka sy mamotika ireo mpanafika bakteria sy virosy.
Ny halavan'ny halavany dia eo anelanelan'ny 100 - 400 nm (nanometer) ary misy karazana taratra isan-karazany. Ny mahazatra antsika dia UV-A, UV-B, ary UV-C. Manana ny halavan'ny halavany, ny natiora biolojika ary ny fiainana izy ireo.
Ankoatry ny fanasitranana, UVA koa dia manana tombony amin'ny fanaovana tsinontsinona.
Amin'ny alàlan'ny photocatalyst, misy fanehoan-kevitra simika mihena amin'ny okididia. Ny zavamiaina mifototra amin'ny karbaona, ao anatin'izany ny bakteria, viriosy, setroka, formaldehyde, vovobony, bitika, sns.
2. With the longer wavelength, Jiro UV has weaker energy. Therefore, UVA can't kill virues and bacteria alone without photocatalyst activity.
Mba hampiasa tsara ny jiro UVC dia namolavola teknolojia vaovao izahay, izay afaka mamokatra UVC amin'ny faran'izay kely miaraka amin'ny 3.5mm x 3.5mm tsy misy rakitra.
Izy io dia mahafaty amin'ny microorganisma toy ny viriosy, bakteria, sns, izay miteraka olana ara-pahasalamana samihafa toy ny asma, cantitra, na ny gripa.
Taloha: Fa maninona ireo ankamaroan'ny jiro UV germicidal eo amin'ny tsena dia tsy mahomby?
Next: Afaka mamono ny virus sy ny bakteria ny hazavana UVC